ဒူဒူကြီး: "Inert Gas System (၂)"
Fig. Scrubber unit
boiler မှထွက်လာတဲ့၊ flue gas တွေဟာ အလွန်ပူနေတဲ့အပြင်၊ soot တွေနဲ့၊ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်လို harmful substances တွေလည်းပါဝင်နေပါ တယ်။ scrubber unit ရဲ့အပေါါဖက်မှ၊ အောက်ဖက်သို့ sea water ကို downward စီးဆင်းစေပြီး၊ flue gas တွေကိုတော့၊ scrubber unit ရဲ့ အောက်ခြေမှပေးသွင်းကာ၊ အပေါါဖက်သို့ upward ဖြတ်သန်းစေခြင်း ဖြင့်၊ soot တွေနဲ့ harmful substances တွေဟာ၊ sea water မှာပျော်ဝင်သွားပါတယ်။ sea water နဲ့ flue gas တွေ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိစေရန်၊ spray nozzles တွေ၊ perforated plates တွေနဲ့ venture nozzles အစရှိတဲ့၊ arrangement တွေကို၊ scrubber unit အတွင်းမှာ၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ scrubber unit ဟာ heat exchanger တခုကဲ့သို့လည်း၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
flue gas တွေဟာ၊ hot corrosive gases တွေဖြစ်ပါတယ်။ flue gas တွေ ဖြတ်သန်းမယ့် scrubber unit ကို၊ highly corrosion resistant material တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားသလို၊ cleaning အစရှိတဲ့၊ maintenance ကိစ္စတွေကို၊ အလွယ်တကူဆောင်ရွက်စေနိုင်ဖို့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ demister ဟာ၊ scrubber ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာရှိပြီး၊ polypropylene သို့မဟုတ် cyclone dryers တွေကိုအသုံးပြုကာ၊ flue gas ကိုခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ demister ကိုဖြတ်သန်းပြီး ထွက်လာတဲ့ gas ကို၊ inert gas ရယ်လို့ စတင်သတ်မှတ်ခေါါဆိုနိုင်ပါတယ်။ 'SOLAS Regulations' အရ၊ မီးလောင်ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်အခြေခံ၊ ရေနံနဲ့ ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေကို၊ သဘေ်ာမှ၊ discharge လုပ်တဲ့နှုံး တနည်းအားဖြင့် volumetric discharge rate ထက်၊ အနည်းဆုံး (၁၂၅) % ပိုပြီး၊ inert gas ကို၊ tank တွေအတွင်း ပို့လွှတ်ပေးရန်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
IG system မှာအသုံးပြုမယ့် blower fan ရဲ့ volumetric capacity ဟာ၊ cargo pump ရဲ့ maximum discharge capacity ထက် (၁၂၅) ဆ ပိုများဖို့လိုပါတယ်။ volumetric capacity တို့၊ discharge capacity တို့ဆိုတာကတော့ flow rate ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး၊ ယူနစ်အနေနဲ့ Cu. meter/ hour နဲ့တိုင်းတာ သတ်မှတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် capacity တူတဲ့၊ blower (၂) လုံးကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ operation မှာတလုံးတည်းမောင်းနှင်ကာ၊ အခြားတလုံးကို stand by အရံအဖြစ်ထားပါတယ်။ တခါတရံမှာတော့ operation အတွက်၊ blower အကြီးတလုံးနဲ့ topping up အတွက်၊ blower အသေးတလုံး တတ်ဆင်ထားတာကို၊ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ IG blower တွေကို၊ blower room မှာသီးသန့်တတ် ဆင်ထားပြီး၊ draining arrangement တွေ ပါဝင်ကာ၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
blower တွေရဲ့ အဝင်နဲ့ အထွက် blower inlet နဲ့ outlet တွေမှာ non-return valve တွေ တတ်ဆင်ထားသလို၊ valve အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကိုတော့ solenoid valve တွေမှတဆင့် pneumatically သို့မဟုတ် hydraulically operated အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် valve တွေရဲ့ အဖွင့် သို့မဟုတ် အပိတ် open & shut position တွေကို၊ CCR ဆိုတဲ့ cargo control room မှသိနိုင်ဖို့၊ limit switch တွေကို sensor အဖြစ်တတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။
'SOLAS Regulation Part B, Prevention of fire and explosion, Regulation 5.5' အရ၊ DWT တန်ချိန် (၂၀၀၀၀) နှင့်အထက်၊ ရေနံနဲ့ ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို၊ သယ်ဆောင်မယ့်သဘေ်ာတိုင်းဟာ "Inert Gas System" တတ်ဆင်အသုံးပြုရပါတယ်။ IG system နဲ့ပက်သက်သမျှ၊ အရေးကြီးသတိပေးချက် critical alarms တွေကို၊ CCR ဆိုတဲ့ cargo control room မှာသာမက၊ machinery spaces နဲ့ bridge မှာပါ၊ အချက်ပြအသိပေးစေဖို့ visible & audible alarm တွေအဖြစ်၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Fig. Cargo control room
ဒါ့အပြင် alarm, monitoring နဲ့ control System တွေအတွက် အသုံးပြုထားတဲ့ sensors တွေအပါအဝင်၊ instrumentation ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းအားလုံးဟာ moisture, corrosion, excessive vibrations, large variations in temperature အစရှိတဲ့အခြေအနေတွေကို၊ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပုံမှန်အလုပ် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိရမယ်လို့ SOLAS Regulations အရပြဌာန်းထားပါတယ်။
scrubber unit မှာ လုံလောက်တဲ့၊ cooling sea water ရရှိခြင်း ရှိမရှိကို၊ သိစေဖို့ pressure gauges, pressure switches တွေနဲ့ pressure transmitter တွေကို တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ per-specified level ပမာဏရဲ့ အောက်သို့၊ cooling water pressure ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ၊ scrubber cooling water inlet မှာ တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ pressure switch မှ activated လုပ်ပြီး၊ အသိပေးပါတယ်။ အလားတူ certain level ပမာဏထက် မြင့်တက်လာတာကိုသိစေဖို့၊ float switch ကို တတ်ဆင်ထားပြီး၊ အသိပေးပါတယ်။
Fig. IG blower
scrubber unit နဲ့ blower ရဲ့ အထွက်မှာ၊ inert gas ရဲ့ အပူချိန် temperature ဟာ၊ (၆၅) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်မှ (၇၅) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အတွင်းသာ၊ ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ specified range ထက် အပူချိန်ပိုလာတာကို၊ သိစေဖို့ temperature gauge, temperature switch တွေနဲ့ temperature sensor တွေကို တတ်ဆင်ထားပါတယ်။
အကယ်၍ pre-cooler ကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့လျှင်၊ cooler ရဲ့ cooling water inlet နဲ့ outlet တွေမှာ၊ temperature gauge တွေတတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်သလို၊ high temperature alarm ကိုပါတတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ deck seal unit ဟာ၊ wet type ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ water level ကျဆင်းသွားခြင်းကိုသိစေဖို့၊ low level alarm ကိုလည်း တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ inert gas ရဲ့ pressure ဟာ၊ certain preset limit အတွင်းမှာသာ ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းတစုံတခုကြောင့် critical level ရဲ့အောက်ကို၊ pressure ထိုးကျသွားတဲ့အခါ၊ tank ထဲမှ၊ atmosphere ဟာလည်း၊ flammable range အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ inert gas pressure ကျသွားတာနဲ့ cargo pump ကို အလိုအလျှောက် ရပ်တန့်သွားစေရန် automatic shut down system တွေကို ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားသလို၊ low pressure alarm and monitoring system ကိုလည်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Fig. Scrubber draining system
scrubber unit မှာ flue gas ဖြတ်သန်းအအေးခံစဉ်၊ flue gas အတွင်း၊ ပါဝင်နေတဲ့၊ 'soot' တွေဟာ sea water ထဲရောနှောပျော်ဝင်သွားပြီး၊ sea water outlet မှတဆင့်၊ ပင်လယ်ထဲကို draining အနေနဲ့ စွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ scrubber unit ရဲ့ draining system မှာ၊ ship side valves တွေဖြစ်တဲ့ non return valve နဲ့ over board valve တနည်းအားဖြင့်၊ ship side valve တို့ပါဝင်ပြီး၊ machinery space ဆိုတဲ့၊ engine room မှ manually နဲ့သာမက၊ pneumatically operated သို့မဟုတ် hydraulically operated solenoid valve တွေကို အသုံးပြုပြီး၊ CCR မှလည်း၊ အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ scrubber outlet drain line ဟာ၊ carbon steel အသုံးပြုထားတဲ့ pipeline ဖြစ်ပြီး၊ corrosion ဖြစ်ပေါါမှုကိုတားဆီးနိုင်ဖို့၊ pipeline ရဲ့အတွင်းပိုင်းနံရံတွေမှာ anti-corrosive coating သုတ်ဆေးကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
SOLAS Regulations မှာ၊ scrubber unit ရဲ့၊ sea water system အတွက်၊ pump တွေကို သီးသန့်တတ်ဆင် အသုံးပြုရမယ်လို့၊ သတ်မှတ်ထားသလို၊ piping system အနေနဲ့လည်း၊ သဘေ်ာရဲ့ bilge & ballast system နဲ့ main fire system တို့ဖြင့်၊ ဆက်သွယ်ထားခြင်းရှိပဲ၊ သီးခြားတည်ရှိနေရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ SOLAS Regulations မှာ၊ scrubber unit ရဲ့၊ sea water system အတွက်၊ pump တွေကို သီးသန့် တတ်ဆင် အသုံးပြုရမယ်လို့၊ သတ်မှတ်ထားသလို၊ piping system အနေနဲ့လည်း၊ သဘေ်ာရဲ့ bilge & ballast system နဲ့ main fire system တို့ဖြင့်၊ ဆက်သွယ်ထားခြင်းရှိပဲ၊ သီးခြားတည်ရှိနေရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ scrubber unit cooling sea water pumps တွေကိုအမြဲတမ်း၊ (၂) စုံတတ်ဆင်ထားသလို၊ deck seal unit အတွက်လိုအပ်တဲ့ sea water ကိုလည်း၊ scrubber unit cooling sea water pumps တွေမှပေးပို့ပါတယ်။ scrubber unit cooling sea water pumps တွေဟာ၊ သဘေ်ာ light weight condition မှာလည်း၊ အလုပ်လုပ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
IG system မှာတတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့၊ valves တွေဟာ၊ temperature ကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုအပ်သလို၊ အလွယ်တကူ corrosion မဖြစ်ပေါါစေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ cast iron ကိုအသုံးပြုထားပေမယ့်၊ အသုံးပြုမယ့် condition အနေအထားဟာ (၂၀၀) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကျော်ကျော်မှာဖြစ်သလို၊ soot တွေဟာ၊ valve seat တွေပေါါ deposit ချိုးတွေအဖြစ်ကပ်မနေစေဖို့လည်းလိုပါတယ်။ valve တွေကို၊ manually operated နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် automation system တွေသုံးကာ၊ operated လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ function မှန်ပေမယ့်၊ valve seat တွေမှာ၊ soot တွေကပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ leakage ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
scrubber အတွင်းကို ဝင်ရောက်လာမယ့် boiler မှ၊ exhaust gas သို့မဟုတ် flue gas ရဲ့ temperature uptake point ဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ scrubber ဟာ၊ capacity ကျနေခဲ့ရင်၊ တနည်းအား ဖြင့် flue gas ကိုလုံလောက်စွာအအေးခံနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ရင်၊ flue gas တွေရဲ့ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုကို၊ လျှော့ချနိုင်ခြင်း မရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ scrubber outlet မှာ၊ oxygen content ဟာ (၈) % နီးပါးခန့် ရှိနေခဲ့လျှင်၊ scrubber နဲ့ draining System အတွင်းမှာ၊ soot တွေကပ်နေပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ inert gas system ကို အချိန်အတော်ကြာ မသုံးပဲရပ်ထားတဲ့အခါ scrubber unit နဲ့ draining system ထဲမှာ၊ soot တွေ ခဲကာ ကပ်နေနိုင်ပြီး၊ inert gas system ပြန်သုံးတဲ့အခါ၊ oxygen content လုံးဝချလို့မရတာမျိုးကိုလည်း ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာလေးတခုကို၊ ပြောပါရစေ။ product tanker တစီးမှာ (၂) နှစ်ခန့်၊ ရေနံထွက် ပစ္စည်း petroleum products တွေကိုမသယ်ပဲ၊ စားအုန်းဆီ palm oil နဲ့ ဟင်းရွက်ဆီ vegetable oil တွေကို၊ သယ်ပို့နေရာမှ၊ ရုတ်တရက် ဓါတ်ဆီ gasoline သယ်ဖို့၊ ဖြစ်လာပါတယ်။ ပင်လယ်နက် black sea အတွင်းရှိ၊ အရှေ့ဥရောပတိုင်းပြည်တခုမှာ၊ ကုန်တင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ မြေထဲပင်လယ်ထဲ Mediterranean sea အတွင်းမှ၊ တိုင်းပြည်တခုသို့ ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ IG system ကို အသုံးပြုဖို့လိုအပ်တာမို့၊ မောင်းနှင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ boiler damper တွေကိုလိုအပ်သလို၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းကာ၊ flue gas ကို scrubber အတွင်းသို့ ပေးသွင်းပြီး၊ blower ရဲ့အထွက်၊ oxygen content ကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားပေမယ့်၊ မလွယ်ကူတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် blower motor မှာ၊ over current ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
အရေးထဲအရာပေါါဆိုသလို၊ ရာသီဥတုကလည်း၊ ပင်လယ်နက်ထဲမှာ ဆိုးရွားနေခဲ့ပါတယ်။ လှိုင်းတွေထပြီး၊ နှင်းမြူတွေနဲ့မို့၊ visibility အနေနဲ့ ရှေ့တမိုင်ကိုတောင်၊ မမြင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ မြေထဲ ပင်လယ်နဲ့ ပင်လယ်နက်ကို၊ တူရကီချန်နယ် turkey channel မှဆက်ပေးထားပြီး၊ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ Istanbul မှ အာရှနဲ့ ဥရောပကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့၊ 'Bosphorus' တံတားကြီးအောက်မှာ သဘေ်ာတွေဖြတ်သန်း ခုတ်မောင်းကြပါတယ်။ ပင်လယ်နက်ထဲမှာ ရာသီဥတုဆိုးရွားနေတဲ့အခါ၊ တူရကီချန်နယ်ကိုလည်း အဖျားခတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ တူရကီချန်နယ်ကို ဝင်ထွက်ခွင့် မပေးတော့ပဲ၊ ပင်လယ်နက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ သဘေ်ာတွေက၊ ပင်လယ်နက် ထဲမှာပါတ်မောင်း၊ မြေထဲပင်လယ်မှာရှိနေတဲ့ သဘေ်ာတွေက၊ မြေထဲပင်လယ်ထဲမှာ ပါတ်မောင်းရင်း၊ တူရကီချန်နယ်ဖြတ်သန်းခွင့်ကို စောင့်ရပါတယ်။
တူရကီချန်နယ်ဖြတ်သန်းခွင့်ကိုစောင့်ရင်း၊ IG system ကို၊ stable ဖြစ်စေဖို့ကျိုးစားကျပါတယ်။ ရာသီဥတု ဆိုးတဲ့အပြင်၊ အနှုတ်စင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ ရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာ၊ blower ရဲ့အထွက်၊ oxygen content ကိုလျှော့ချဖို့ နေ့မအိပ်၊ ညမအိပ် အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ ALBORG လို၊ europe boiler တွေမှာ damper flat ကို၊ servo motor မှတဆင့်မောင်းနှင်ကာ၊ လိုအပ်သလို အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးပြီး၊ IHI, VOLCANO နဲ့ MURI အစရှိတဲ့ japan boiler တွေမှာတော့၊ solenoid valve မှတဆင့်၊ damper flat ကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီသဘေ်ာမှာ oxygen content က (၈ %) ကျော်တာနဲ့၊ inert gas ရှေ့ဆက်မသွားစေရန်၊ vent valve မှတဆင့် atmosphere သို့ စွန့်ထုတ်ပစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ scrubber unit ရဲ့၊ manhole cover ကိုဖွင့်ပြီး၊ အထဲကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါ၊ unit ထဲမှာ soot တွေ အများအပြားကပ်နေတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ sea water discharge line မှာလည်း၊ soot တွေကပ်နေမယ်လို့၊ ယူဆပြီး plant ကိုရပ်ကာ၊ overboard valve ကိုပိတ်၊ IG gas outlet pipe spool ကိုဖြုတ်၊ soot remover တွေကိုရေနဲ့ရောပြီး scrubber unit ထဲအပြည့်ဖြည့်ပြီး၊ တညလုံး စိမ်ထားလိုက်ပါတယ်။ plant ကိုရပ်ထားစဉ်မှာတလက်စတည်း၊ blower ကို ဖွင့်ကာ overhauling လုပ်ကြပါတယ်။ နောက်တနေ့ မှာ scrubber unit ကို၊ drain လုပ်ပြီး၊ plant ကိုပြန်မောင်းတဲ့အခါ၊ oxygen content လျှော့ကျသွားပါတော့တယ်။
Reference and Image Credit to : International Maritime Organization. ISBN 92-801-1262-7, http://www.arb.ca.gov, http://seagoing.narod.ru, http://www.tc.gc.ca
Posted by ကိုထွန်း at 17:09
AH 27 July 2012 at 21:32
ကျေးဇူးပါ အကို.. ကျွန်တော် Tanker တွေ မဆောက်ဖူးပေမယ့် ဒီလို system ကို ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ဗဟုသုတ အများကြီး ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
Bino 10 August 2012 at 01:01
ရှင်းချက်တွေကောင်းတဲ့အပြင် ကိုယ်တွေ့လေးပါ စေတနာနဲ့ share လုပ်ထားလို့ မငိုက်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ Rule code တာ update မဖြစ်ဘူးလားလို့။
Inert Gas System အခန်းက SOLAS (2009) Part I, Ch.II-2 Construction- Fire Protection, fire detection and fire extinction ရဲ့
Part B: Prevention of fire and explosion, Regulation 4, para. 5.5.1.1 မှာရှိပါတယ်။